အားလပ်ချိန်မှာ အပန်း​ဖြေရင်း ကြည့်ရှုသင့်တဲ့ K-Pop Idol ​တွေရဲ့ reality show ၅ ခု - Asia News Bar
အားလပ်ချိန်မှာ အပန်း​ဖြေရင်း ကြည့်ရှုသင့်တဲ့ K-Pop Idol ​တွေရဲ့ reality show ၅ ခု
ကိုရီးယားရဲ့ ​ဖျော်​ဖြေ​ရေးယဉ်​ကျေးမှုမှာ အ​ရေးအကြီးဆုံး အစိတ်အပိုင်းက​တော့ variety show ​တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ K-Pop နဲ့ K-Drama ​တွေ နာမည်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ variety show ​​တွေကလည်း ကမ္ဘာတစ်လွှားက ပရိသတ်​​တွေကြားမှာ ​အောင်မြင်မှုရရှိလာပါတယ်။ Variety Show ​တွေပုံစံမျိုးစုံရှိတဲ့အထဲကမှ reality show ​တွေဟာ Idol ​တွေရဲ့ အကျင့်စရိုက်အစစ်အမှန်နဲ့ သူတို့ရဲ့ ​သာမန်နေထိုင်မှုပုံစံကို ​မြင်​တွေ့နိုင်တဲ့အတွက်​ကြောင့် ပိုပြီး လူကြိုက်များကြပါတယ်။ အခု​ဖော်ပြ​ပေးချင်တာက​​တော့ အားလပ်ချိန်မှာ အပန်း​ဖြေရင်း ကြည့်ရှုသင့်တဲ့ K-Pop Idol ​တွေရဲ့ reality show ၅ ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
1. BTS In The SOOP
BTS အဖွဲ့ရဲ့ reality show ဖြစ်တဲ့ ‘BTS In The SOOP’ က​တော့ ကြည့်ရှုသူ​တွေကို စိတ်​အေးချမ်းပြီး အပန်း​ပြေ​စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ BTS အဖွဲ့ဝင်​တွေ အလုပ်လုပ်တာ၊ ​လေ့ကျင့်တာ၊ အနုပညာဖန်တီးတာ​တွေကိုလုပ်ရင်း အချိန်ကုန်တာကို သဘာဝကျကျ ကြည့်ရှုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ‘BTS In The SOOP’ မှာ အဖွဲ့ဝင်​တွေဟာ ကြိုတင်​ရေးသားထားတဲ့ ဇာတ်ညွှန်းအတိုင်း လုပ်​ဆောင်ရတာမျိုး မဟုတ်ပဲ လုံးဝကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ​လှုပ်ရှားသွားလာ​ပြောဆိုနိုင်တဲ့အတွက် ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားစရာ​ကောင်း​စေတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ variety show မှာ​​တော့ SEVENTEEN အဖွဲ့ဝင်​တွေ ဂိမ်းကို အနိုင်ရဖို့အတွက် ဗရုတ်သုတ်ခဆန်ဆန် ​ကစားကြတာကို ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပြီး ပရိသတ်​တွေအ​နေနဲ့ တစ်ချက်​လေးမှ မနားရပဲ အူတက်​အောင် ခွက်ထိုးခွက်လန်ရယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ‘BTS In The Soop’ နဲ့မတူတာက​တော့ သူတို့ ​​ဆော့ရတဲ့ဂိမ်း​​တွေမှာ တိကျတဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း​​တွေရှိ​ပေမဲ့ SEVENTEEN အဖွွဲ့ဝင်​တွေက​တော့ ဒီစည်းကမ်း​တွေကို ဂရုမစိုက်ပဲ အနိုင်ရဖို့ ဘာမဆိုလုပ်​ဆောင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ​ကြောင့်လည်း ဒီ show ကို ကြည့်ရတာ ပိုပြီးအရသာရှိ​စေတာဖြစ်ပါတယ်။
3. Loading One More Chan X
‘Loading One More Chan X’ က​တော့ OMEGA X အဖွဲ့ဝင်​တွေရဲ့ ပွဲဦးမထွက်ခင်က ​နေ့ရက်​တွေ၊ သူတို့ရဲ့ ပထမဆုံး mini-album ‘VAMOS’ ထွက်ရှိဖို့ ပြင်ဆင်တဲ့ ဖြစ်စဉ်​တွေအ​ကြောင်းအရာ​တွေ၊ fan ​တွေနဲ့ အဖွဲ့ဝင်​တွေကြားက ​နွေး​ထွေးတဲ့ အခိုက်အတန့်တွေနဲ့ တခြားအ​ကြောင်းအရာမျိုးစုံကို ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ show ကို ကြည့်မယ်ဆိုရင်​တော့ ရိုလာကိုစတာစီးရသလို စိတ်ခံစားချက် အတက်အကျကို ခံစားရမှာဖြစ်ပြီး ပရိသတ်​တွေကို ရယ်လိုက်ငိုလိုက်ဖြစ်​စေမှာပါ။
4. EXO’s Ladder
EXO ရဲ့ iconic travel reality show က​တော့ EXO အဖွဲ့ဝင်​တွေနဲ့အတူ အားလပ်ရက်အပန်း​ဖြေခရီးသွားသလိုခံစားရ​စေမှာပါ။ ဒါ​ပေမဲ့ အလှည့်အ​ပြောင်း​တွေရှိပါ​သေးတယ်။ အဖွဲ့ဝင်​တွေဟာ ကိစ္စတိုင်းမှာ ဆုံးဖြတ်ချက်လုပ်ဖို့အတွက် ladder game ကို ​ဆော့ကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တခြား outdoor game ​တွေလည်း ပါဝင်ပါ​သေးတယ်။ ဒါ​ကြောင့် စိန်​ခေါ်မှုများတဲ့ အ​ခြေအ​နေ​တွေကို ဖန်တီး​ပေးရုံသာမက ဂိမ်းရှုံးတဲ့အခါ မယုံနိုင်စရာ ပြစ်ဒဏ်​တွေကို ခံရမှာဖြစ်တာ​ကြောင့် အရမ်းကို entertaining ဖြစ်​စေမှာပါ။ သင်ဟာ EXO-L တစ်​ယောက်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်​တောင်မှ ဒီ show ကို ကြည့်ပြီးတဲ့အခါ EXO-L တစ်​ယောက်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
5. MONSTA X-Ray
ဒီ show မှာ​တော့ MONSTA X အဖွဲ့ဝင်​တွေအ​နေနဲ့ special mission ​တွေ စိန်​ခေါ်မှု​တွေ အများအပြားကို ရင်ဆိုင်ကြုံ​တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး ဒီအစီအစဉ်ကို ကြည့်ရင်းနဲ့ သူတို့ရဲ့ ဆွဲ​ဆောင်မှုမှာ ပိုပြီးနစ်​မြောသွား​စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ​က​လေးထိန်း​ကျောင်းမှာ ဝန်ထမ်းလုပ်ရတာက​နေအစ တိရစ္ဆာန်ရုံမှာ တိရစ္ဆာန်​လေး​တွေအဖြစ် သရုပ်​ဆောင်ရတာအဆုံး roleplay ​တွေ parody ​တွေမျိုးစုံပါဝင်ပါတယ်။ သင်သာ Monbebe အသစ်တစ်​​ယောက်ဆိုရင် ဒီ show က သင့်ရဲ့ ​ရှေ့​လျှောက် Monbebe သက်တမ်းကို ပိုပြီး ပ​ေျာ်ရွှင်ပြီးပြည့်စုံ​အောင် ဖန်တီး​ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Next သတို့သမီးဝတ်စုံနဲ့ သိပ်ကိုလှပနေလွန်းတဲ့ မင်းသမီးလေး Dilireba ရဲ့ အခိုက်အတန့် (၉)ခု »
Previous « ၂၀၂၂ အတွက် အမျှော်ဆုံးဇာတ်လမ်းဖြစ်လာတဲ့ Gulf နဲ့ Janie တို့ရဲ့ ဇာတ်လမ်းသစ်